Micro Cement + Rattan, Shandisa Texture Kugadzira Space Atmosphere | HURD DESIGN - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / Micro Cement + Rattan, Shandisa Texture Kugadzira Space Atmosphere | HURD MADZIMAI
2021 / 08 / 14 kupatsanuraInterior design 3808 0
Hirsch Dhizaini Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Kana zvese zvinhu, zvese ruzivo uye zvese zvinongedzo zvechinhu zvakaderedzwa uye zvakamanikidzwa kune icho chakakosha. Ichava nehunhu uhwu, unova mhedzisiro yekubvisa zvisina kukosha zvinhu.
Muridzi wemba mune ino kesi aimbove dhizaini wemukati, rudzi rwezera redu. Parizvino, iye akazara mukadzi. Nekuti vana vake vachiri vadiki, anoswera kuzhinji kumba. Izvi zvakare zvinopa muridzi wemba nguva yakawanda yekuvandudza zvido zvake, kuverenga, hunyanzvi, Peking Opera, uye kupenda.
Zvekugadziriswazve, muridzi wemba akanyanya kutarisisa kukodzera kwemusha uye nevanhu. Aida kuti imba yake "isasungwe nemaitiro, asi iine nzvimbo yakakwana yekukudziridza zvido zvake. Iyo nzvimbo yakanatswa mukureruka kwayo, yakajeka uye inodziya. Vanhu vanogona kunzwa kusununguka vari muchadenga. ”
Isu tinoremekedza zvizere zvishuwo zvemuridzi wemba. Iyo nzvimbo haina kunyanyisa kushongedzwa, uye iyo mhepo inogadzirwa nemavara ezvishongedzo izvo pachayo. Isu tinotarisa pakuenzanisa kuyanana pakati penzvimbo uye pakati penzvimbo nevanhu. Takatanga kubva pane zvakadzama kuti tigadzire yekunakidzwa imba yekutandarira. Kugadzira imba yemuridzi wemba ndeyake wepamba peach maruva sosi!
Kuputsa tsika, imba yekutandarira yakanakisa uye yakavanzwa mune ruzivo
Imba yekutandarira yakanakisa uye yakavanzwa mune zvakadzama
Tichifunga nezve muridzi wemba kutsvagisa utsanana, musiyano wehurefu wakaitwa pakati penzira yekupinda nepasi pemukati. Mugadziri akamisa nzvimbo yeguruva yakanyura kuti ivharidze ivhu kuti risapinda mukamuri. Iwo mataira epasi erima anoshandiswa zvakare kugadzira yakachena uye yakagadzikana nharaunda yekugara.
Imba yekutarisa iri padivi pekupinda inopa vagari nzvimbo yekuchengetera. Tambo inoshanduka pamba ipfupi. Pasi panogadzirirwa kuita kuti chikamu chinoshanda chezvimbo chioneke nekupenya.
Pazai neyakajairwa imba yekutandarira yakare-nhatu-zvidimbu kurongedzwa, ine imwechete pasofa pachinzvimbo chehombe uye hombe sofa. Nzvimbo yacho inozorodza zvakanyanya. Mutsara wese weakavhurika ekuchengetera makabati akavakirwa maererano nemadziro anogona kushandiswa sesherufu yekuratidzira yezviratidziro zvemuridzi nemabhuku. Nekushongedzwa kwemabhuku uye pendi, imba yekutandarira ine mweya wevanhu.
Pamusoro pemba yekutandarira yakagadzirwa ne micro-sement. Mugadziri akashandisa kupatsanurana kwemavara kuvhura iyo nhanho nemadziro uye pasi, uye inowirirana pamwe nekudzikira uye nemagineti mwenje mutsetse. Mitsara yakapinza inooneka inoita kuti nzvimbo iwedzere kujekesa.
Imba yekutandarira neyekudyira zviri munzvimbo imwechete, uye pamusoro nepasi zvakakamurwa zvisingaonekwe. Chiedza chezuva nemhepo zvinodururira mumba zvakasununguka. Iyo yakanyanyisa yekuchengetera kabhodhi yakarongedzwa pamadziro. Izvo zviri nyore kuchenesa iyo yepazasi chikamu. Pamusoro pekabhini inogona kushandiswa sesherufu. Dhirowa dhizaini, yekuchengetedza inogona zvakare kukamurwa muzvikamu zvakasiyana.
Balcony inosanganisirwa mukati. Simudza zvishoma kuti uite musiyano neimba yekutandarira, uye ugovane nzvimbo yekuti muridzi wemba averenge uye adhirowe. Idzi nzvimbo mbiri hadzina kupatsanurwa panyama, zvichisiya imwe nzvimbo yekubatana kwemhuri. Nguva yekufara kwevabereki nevana vacheche kumba ndeyekuti vana vanotamba vachifara mumba yekutandarira, ivo amai vachidhonza nekuverenga munzvimbo yavo, uye iwe unoona zviso zvevana zvinonyemwerera paunotarisa mudenga.
Kubatanidzwa kwechikafu nekicheni, kunakirwa nenguva yekudyira munzvimbo yepamusoro-soro kusanganisa kwechikafu nekicheni
Iyo yakarongedzwa kurongedzwa kwekugara uye yekudyira inoita mutsetse wekutama necorridor. Kubika uye kudya zviri nyore uye zvakasununguka. Tafura yekudyira inogadzirwa nechena machena. Iyo inopesana neakasviba huni anoshandiswa mune yekuchengetera kabati, ichizorodza inorema kunzwa kwenzvimbo. t-yakaumbwa, ine mitsara yakapinza kugadzira mwenje nzvimbo.
Iwo marattan + log ekudyira macheya anounza pfungwa yekudziya, zvichiita kuti nzvimbo yekudyira ive inotonhorera. Nema monogrammed chandeliers, chikafu chega chega chinodziya uye chakanakisa pasi pechiedza.
Imba yekudyira nekicheni zvakarongedzwa zvinoenderana nematanda ekutanga. Kudya nekicheni zvakasanganiswa, uye yekudyira neyekicheni mitsara ipfupi. Paunopedza kubika, unogona kuenda kukicheni kuti unakirwe nechikafu chinopisa nekukasira. Iyo yekuchengetera kabati inowedzera pamwe nemadziro, uye musanganiswa wezvakavanzika uye zvakafumurwa dhizaini zvinoita kuti basa rekuchengetedza riwedzere. Izvi zvese idhabhini yekudyira uye nzvimbo yekuchengetera mudziyo.
Kutarisa kuimba yekudyira kubva mukoridho, iri nyowani uye yakapusa. Iwo asingaonekwi skirting akashongedzerwa pamwe nemwenje wekuvhenekera kutyora rima uye rakamanikana mukoridho. Izvi zviri nyore kune hupenyu hwemhuri uye inosuma inodziya mhepo kune iyo nzvimbo.
Yakakodzera uye yakasununguka yekurara nzvimbo
Tichitarisa kune tenzi yekurara kubva mukoridho, iyo yakatetepa furemu minimalist musuwo wakasimudzwa. Inoona, yakanyanya kuchena uye yakabatana. Iyo yepamusoro yekoridho inogadzirwa neiyo imwecheteyo micro-sement zvinhu senge imba yekudyira kuchengetedza kuenderera kwenzvimbo. Magetsi akavigwa pasi anoshandiswa semagetsi ekuratidza kuratidza kukwirira kwepasi.
Kupinda mune tenzi yekurara, cheki yekutarisa uye tenzi yekugezera zvakarongedzwa zvakarongeka nenzira. Chikamu chinoshanda chiri pachena uye dhizaini dhizaini inoita kuti hupenyu hwemuridzi huve nyore.
Iwo madziro eimba yekurara akafukidzwa nehuni veneer. Izvo zvakasikwa zvinhu zvinounza yakawanda yepamusoro-kirasi dhizaini kune iyo nzvimbo. Rusvingo rwemashure rwakashongedzwa neyegiredhi grey, uye iyo nzvimbo yakatetepa. Iyo yekufuga yematehwe ine yakawanda mhando. Kusarudzwa kweruvara rweyero uye girini kunoita kuti mamiriro ekurara ave nehupenyu.
Iyo yekufamba-in kabhodhi inokwereta imwe nzvimbo kubva kune tenzi yekurara, ichisiya yakakwana nzvimbo yekuchengetera yemhuri mbatya. Magirazi maviri marefu akaiswa zvakaenzana pamusuwo wewadhiropu, iri nyore pakuchinja mbatya uye kuyedza mbatya. Tichitarisa kubhedhuru kubva pagirazi, iyo nzvimbo inodarika uye izere nekufarira.
Makabati acho akapatsanurwa zvakajeka. Iyo refu yenguo nzvimbo inovimbisa kuti hakuna makwinya mune mbatya. Iyo yepamusoro nzvimbo yakakamurwa inochengetera machira, machira emubhedha uye mbichana-dzemwaka-wenguva. Dhirowa repazasi rinochengetera zvisingaite uye rinopera. Yakavharwa dhizaini yekuona kuti chengetedzo haina kuwira muguruva. Siya iyo hwindo nzvimbo kuti ugadzire nzvimbo yekupfeka inosanganisirwa neyekuchengetera kabati. Izvi hazvidzivirire mwenje mumba, asi zvakare zvinoita kuti nzvimbo yekutarisa iwedzere kushanda.
Ichena ndiyo huru ruvara rweiyo huru yekugezera. Mimwe yemadziro yakashongedzwa nerima, ichigadzira isinganetsi pfungwa yekushongedzwa. Bheseni rakakomberedzwa pasi pasi uye rinogona kushandiswa senzvimbo yekuchengetera. Kushandiswa kwenzvimbo kunowedzerwa munzvimbo diki.
Imba yevana uye kudzidza kunochinjaniswa kupa vana nzvimbo yakawanda yekuzorora. Panguva imwecheteyo, kudzidza kuri padyo nekamuri yekurara, saka zviri nyore kuti muridzi averenge mabhuku asati arara.
Iyo yekuwaridza uye maketeni mukamuri revana ari mune yakasviba pink, zvinoenderana nezvinodiwa nevasikana vadiki. Izvi hazvina kunyanyisa gaudy. Rusvingo rwese rwekuchengetera makabati rwunoita kuti nzvimbo yacho iwedzere kugona. Iyo yepazasi yakavhurika kamuri iri nyore kuchengetedza matoyi evana.
Uchishandisa huni kugadzira chinyararire kudzidza
Dhesiki rakareruka rakavakwa pakati pekuchengetera kabati nemadziro padyo nepahwindo. Chikamu chepazasi chedhesiki chinosiiwa chisina chinhu kuti muverengi atambanudze makumbo. Mwenje miviri yakavanzwa yakaiswa pamusoro yekuvhenekesa kana uchiverenga uye uchizorora. Jira jena pahwindo rinosvina mwenje uye rinodzivirira maziso.
Makamuri akavhurika emakabati ekuchengetera akakura zvakasiyana. Izvi zvinokodzera kuisa saizi dzakasiyana dzemabhuku. Dhizaini yayo yakasangana nedhesiki inoita kuti zvive nyore kubata nekuisa mabhuku padhuze. Rakiti rakagadzirwa nematanda ane simba rakasimba rekugadzirwa, iro rinozadzisa runyararo uye runako hunhu hwemabhuku. Iyo desktop inogadzirwa neepamusoro-giredhi grey rock pani, iyo inoita mutsauko nebhuku rebhuku uye inoputsa monotony yenzvimbo.
Matatu akapatsanurwa yekugezera, hupenyu hwakareruka
Kuchinja maratidziro edzimba yekugezera, kugadzira matatu akasiyana dhizaini kusimudzira hupenyu hwehupenyu. Shandisa kona yekona kuronga nzvimbo yakaoma. Mahwindo emativi ese anotungamira mwenje mukamuri. Izvi zvinokodzera kufefetedza uye nzvimbo yacho yakajeka uye isina nyoro. Muchina wekuwachisa neyekuchengetera makabati zvakagadzirirwa kumashure. Ipo ichiona nzvimbo yakashambidzika uye ine mhepo, nzvimbo yekuchengetera ichiwedzerwa.
Iyo yekugezera nzvimbo inoshandisa iyo refu pasi dhureini, iyo ine yakakura nzvimbo yemvura pane yakaenzana repasi pevhu. Yakagadzirirwa pamadziro kuti ichengetedze kutendeka kwetara yepasi. Matiles emadziro uye epasi anogadzirwa madhigirii makumi mana nemashanu kuita mutserendende. Muchadenga, inobvisa iro dambudziko rekuunganidzwa kwemvura.
Dzorerazve nzvimbo, uchigadzira hupenyu hwehunhu
Raki rejasi rakakamurwa nechengetedzo kabati munzvimbo yekupinda, kuitira kuti zvive nyore kuchinja shangu nembatya pamusuwo.
Iyo inotakura madziro inoshandiswa seiyo axis kuronga iyo yakasanganiswa yekugara uye yekudyira imba, uye inogadzira yakavhurika uye inofamba inofamba mutsara. Vanhu vanofamba vakasununguka uye vakasununguka munzvimbo.
Rusvingo rwakakoromorwa kugadzira matumba ekugezera echipiri akapatsanurwa. Iyo yakaoma nzvimbo yakarongedzwa nehwindo mukona yenzvimbo. Imba yekugezera yakachena uye yakapusa, uye nzvimbo yacho zvakare yakajeka.
Chidzidzo uye kamuri revana zvakachinjaniswa kupa mwanasikana nzvimbo yekurara yakasununguka uye nekukwenenzvera mutsetse wezororo wemuridzi.
Iro rawadhiropu rekamuri yekurara rakawedzerwa uye chikamu chenzvimbo mu master bedroom chakakweretwa. Izvi zvinogadzira cheki yekutarisa ine akawanda mabasa, sekuchengetedza uye kupfeka, kusangana nemuridzi wemba kudiwa kwenzvimbo yekuchengetera.
Purojekiti Nzvimbo 丨 Shanghai, China - Xuhui Ruwa
Nzvimbo yeprojekti 丨 120㎡
Project nzvimbo 丨 Hengan Dare
Zvishandiso zvinoshandiswa: Wood veneer, marble, micro-simende, nezvimwe.
Ita dhizaini ine tembiricha kuti uzive imba ine manzwiro
Pakapfuura :: Chiedza-Rakajeka Acrylic, Kududzira Runako rweArt Mune Mune Yemazuva Ano Context | Yuanhe Daqian Zvadaro: Yakashongedzwa Uye Yakashongedzerwa Chirevo, Kuumba Muguta Rekugara Space | SRDP DESIGN
2021 / 08 / 15 3246
2021 / 08 / 15 4155
2021 / 08 / 15 3644
2021 / 08 / 14 3381
2021 / 08 / 14 3199
2021 / 08 / 13 4117